Xildhibaanno ka walaacsan in jarista dhirta Soomaaliya la casriyeeyey – Kalfadhi
Xildhibaanno ka walaacsan in jarista dhirta Soomaaliya la casriyeeyey
Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka ayaa u sheegay Kalfadhi iney qabaan walaac la xiriira in la casriyeeyey Jarista Dhirta Soomaaliya, si looga sameeyo dhuxul. Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi ayaa u sheegay Kalfadhi in mashiinno casri ah hadda lagu jaro dhirta gobollada Jubbooyinka. “Jubbooyinka waxaa lageeyay mashiinno casri ah, oo saacaddiiba jaraya geedo badan” ayuu yiri Xildhibaan Jindi.
Xildhibaanku waxa uu sheegay in dhulkii keymaha badnaa uu hadda shabbaho lama dagaan oo kale, sida uu hadalka u dhigay. “Waxa ka socda Jubbooyinka waa waxaan horay loo arag” ayuu yiri Xildhibaan Jindi. Isagoo ka hadlaya sababta uu u maleynayo iney xaalufintaan dhiiragalineyso ayuu yiri “marka hore, waxaa dhuxusha laga Jaraa dhul aysan dowladdu ka talin, oo gacanta ugu Jira maamulo iyo kooxo gaar ah, marka xigtana, Soomaaliya waxaa ka jira dekado badan oo macmal ah, oo aysan dowladdu wax ka qaban karin” ayuu yiri Cabdirisaaq Jindi.
Xildhibaan Jindi waxa uu Kalfadhi u sheegay inuu qabo in xaalufinta ka socota dalka wax laga qaban karay, laakiin laga indha laabtay oo xoogga leysugu geeyey qeyba kale. Waxa uu yiri “aad ayaa looga gaabiyay, oo waxaa lagu mashquulay arrimo kale, lakiin aad ayey muhiim u tahay illaalinta deegaanka, daaqa iyo duurjoogta”. Baarlamaanka Soomaaliya ayuu sheegay inuu ugu yaraan dejin karay shuruuc xakameysa dhibaatadaan haysata bey’ada.
Xildhibaan Warsame Maxamed (Joodax) ayaa u arka iney tahay nasiib darro iney sii kordheyso jarista lagu haayo dhirta Soomaaliya. Dhibaatadaas waxa uu u arkaa iney dalalka Khaliijku dhiiragelinayaan. Waxa uu yiri “Waxaa ka dambeeya dhoofinta dhuxusha Soomaaliya iyo jarista dhirtii lagu yaqiinay Soomaaliya laba qolo: dowlado Carbeed iyo ganacsato (Soomaaliyeed)”. Waxa uu qabaa iney Carabtu la dooneyso dhulka Soomaaliya sida uu kooda yahay, halka uu ganacsataduna rumeysan yahay ineysan lahayn damiir dhaafsiisan lacag, sida uu hadalka u dhigay.
Xildhibaanku waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay sida, haddii aan deg deg wax looga qaban, ay arrintan halis ugu tahay nolosha iyo cimilada. “Hadda, Soomaaliya waxaa ka jirta meela badan roob yaraan; haddii dhirta la sii xaalufiyana waxaa suuragal ah in roobka oo dhanba la waayo” ayuu yiri Xildhibaan Warsame Maxamed Joodax. Intaan meeshaas la gaarin ayuu Xildhibaanku ku baaqay in dadka wax ka qabashadeeda leh ay wax ka qabtaan.
Labada Xildhibaan waxay ka mideysan yihiin aragtida ah in ay qatartu tahay in, arrintan oo ah halista mustaqbal dhaw soo socota, aysan jirin cid si gaar ah ugu xilsaaran ama isugu xilsaartay. Waxay labadoodaba u sheegeen Kalfadhi in dalal badan ay lacagta ugu badan ku bixiyaan iney dhirto nabad hesho ama bey’ado cagaar ahaato, taas oo ay sheegeen ineysan Soomaalidu wali ku baraarugin faa’iidada ay leedahay.
Xildhibaanno ku eedeeyey Guddoomiye Mursal inuu is-hor-taagi waayey ciidanka la geeyey Baydhaba
Kulankii 31-aad ee Golaha Shacabka oo maanta baaqday
Hawl-wadeennada doorashada iyo wakiillada ururadda ee degmada Qardho oo tababar loo soo gabo-gabeeyay
Madaxweynaha Hirshabelle iyo Wakiilka Qaramada Midoobay oo ka wadda-hadlay dadejinta howlaha doorashooyinka
Archives Select Month October 2021 (49) September 2021 (40) August 2021 (54) July 2021 (67) June 2021 (60) May 2021 (91) April 2021 (87) March 2021 (106) February 2021 (82) January 2021 (92) December 2020 (107) November 2020 (79) October 2020 (84) September 2020 (107) August 2020 (103) July 2020 (110) June 2020 (62) May 2020 (28) April 2020 (37) March 2020 (44) February 2020 (40) January 2020 (35) December 2019 (55) November 2019 (58) October 2019 (52) September 2019 (74) August 2019 (43) July 2019 (26) June 2019 (60) May 2019 (108) April 2019 (127) March 2019 (143) February 2019 (152) January 2019 (147) December 2018 (162) November 2018 (103) October 2018 (75) September 2018 (58) August 2018 (46) July 2018 (46) June 2018 (39) May 2018 (67) April 2018 (36) March 2018 (4) February 2018 (9) January 2018 (9) December 2017 (8) November 2017 (2) October 2017 (11) September 2017 (6)